Iindaba -Zigong Xinhua Industrial Co, Ltd. waba yiyunithi yomlawuli omtsha weZigong
Zigong Xinhua Industrial Co., Ltd. waba iyunithi umlawuli entsha Zigong
I-Cemented Carbide Industry Association, ibambe iisemina zetekhnoloji yokuvelisa imveliso ye-carbide, kwaye ikhokele ekwakheni isiseko semveliso yebar.
Nge-9 kusasa nge-8 kaMeyi, ngo-2021, e-Huidong Hotel e-Zigong City, i-18th Cemented Carbide Production kunye ne-Technological Innovation Seminar eyayibanjwe yi-Zigong City Bureau of Industry and Commerce kwaye yaququzelelwa yinkampani yethu ivuliwe. Inkampani yethu ibe yintsha ngempumelelo. Icandelo elilawulayo.
Kwintlanganiso, uMnu Yang wenkampani yethu wenze njalo
"Itekhnoloji yokuvelisa imveliso ye-carbide entsha kunye neendlela zophuhliso lwexesha elizayo" ingxelo ekhethekileyo. Ndibe nencoko emnandi neenkokheli kunye nabantu abaphethe ngaphezulu kwe-30 yesamente ye-carbide e-Zigong City. Wonke umntu uvumile ukuba iinkampani ze-carbide zesamente ngoku Umsebenzi wophuhliso wokuqala kukugcina amandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa, ukuphucula ulwazi ngokusingqongileyo, kunye nokwandisa amandla emveliso. Inkqubela phambili yexesha elizayo ye-carbide enesamente kufuneka ibe yinto entsha yetekhnoloji ukunciphisa ungcoliseko kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso.
Kwangelo xesha, iZigong Cemented Carbide Industry Association yenze ukuba inkampani yethu ibe neempawu ezigqwesileyo kwimveliso yezixhobo zekhabhayithi njengeemveliso zedolophu ezizayo zeZigong City. Umnumzana Yang wenkampani yethu uthe inkampani yethu izakuzama ukwakha inkampani e China kwiminyaka emithathu. Isiseko semveliso ekhokelayo yeentonga ze-carbide ezinezona zinto zibalaseleyo.
Kwangaxeshanye, inkampani ithathela ingqalelo uphuhliso ngokubanzi, ijolise kwimveliso kunye nophando kunye nophuhliso lweesamente zecwecwe lekhabhayithi, iifayile ezijikelezayo zekhabhayithi, iincakuba zomthi, iimela zeemveliso zecarbide zesamente, kunye nezinto zokubumba zesamente. Zama ukuba sisiseko esaziwayo kunye nesikhokelela kwimveliso yobuchwephesha kwihlabathi kwizinto zesamente zekhabhayithi kunye nezixhobo zokusika i-carbide.
Ngale nkomfa, bonke abasebenzi benkampani baziva ngathi siyayigxotha injongo yokuvuselela ishishini lekhabhayithi le-tungsten e-cemented, kwaye kufuneka sizame nokwenza izinto ezintsha ukwenza umzi-mveliso we-carbide wase-China uphinde uzuze ubukrelekrele kwinqanaba lezorhwebo lehlabathi.
Inkomfa iphele ngokungenagwele ngentsimbi yesine ngoMeyi 8, 2021.